Ungayisebenzisa Kanjani Imidiya Yezokuxhumana Ukusiza Ibhizinisi Lakho | Martech Zone
Ungayisebenzisa Kanjani Imidiya Yezokuxhumana Ukusiza Ibhizinisi Lakho
NgoMsombuluko, Okthoba 6, 2014 NgoMsombuluko, Okthoba 6, 2014 Douglas Karr
Njengoba kunikezwe ubunzima bokumaketha kwezokuxhumana, amathuluzi nokuhlaziywa, lokhu kungabonakala njengokuthunyelwe okuyisisekelo. Ungamangala ukuthi kuphela Ama-55% amabhizinisi empeleni asebenzisa imithombo yezokuxhumana ukwenza ibhizinisi.
Kulula ukucabanga ngemithombo yezokuxhumana njenge-craze engenanzuzo ebhizinisini lakho. Ngawo wonke umsindo laphaya, amabhizinisi amaningi awabukela phansi amandla ebhizinisi ezokuxhumana nabantu, kepha ezenhlalo zingaphezulu kakhulu kwama-tweets nezithombe zekati: Manje kulapho amakhasimende aya khona ukuyofuna imikhiqizo nokuqukethwe, alandele futhi ahlanganyele nemikhiqizo ayithandayo, imibono yabantu abaningi ukuthola izincomo nokudluliselwa, futhi wabelane ngokuqukethwe ngamanethiwekhi abo. Izindawo
Kubakhangisi abasebenzisa imithombo yezokuxhumana, okubalulekile Ama-92% wabakhangisi akhombisa ukuthi imithombo yezokuxhumana ibalulekile ngebhizinisi labo, lisuka kuma-86% ngo-2013 - ngokusho kwe- Umhloli Wezokuxhumana Komphakathi Umbiko Wezimboni Zokumaketha Komphakathi. Kukonke, Izabelomali zemithombo yezokuxhumana kulindeleke ukuthi ziphindwe kabili eminyakeni emihlanu ezayo!
Ngokumangazayo, asicindezeli wonke amaklayenti ukuthi angene ezinkundleni zokuxhumana. Asazi ngoba sihlala sithola ukuthi abanazo ezinye izisekelo zokuba khona kwabo ku-inthanethi endaweni. Bantula isiza esilungiselelwe ukuzulazula kalula. Bantula uhlelo lwe-imeyili lokuxhumana njalo. Bantula amandla okushayela ukuvakashelwa kube ukuguqulwa. Noma abanalo ikhono lokuthi isivakashi sewebhusayithi sicwaninge indawo yabo futhi bathole imininingwane abayidingayo.
Imithombo yezokuxhumana iyindlela yokuxhumana, hhayi nje enye indlela yokulinganisa imizamo yakho yokumaketha. Kukhona okulindelwe yizethameli ukuthi uzophendula, uthembeke, futhi usize ngemithombo yezokuxhumana. Uma ukwazi ukwenza lokho, ungasebenzisa imithombo yezokuxhumana ithoni yokuthengisa, ukumaketha, impendulo nokwandisa ukufinyelela kwakho. Izinkampani zivame ukucabanga ukuthi ukuqala nje ikhasi lenkampani kuFacebook yimithombo yezokuxhumana - kepha kunezinto eziningi kakhulu zesu lokuxhumana:
Isiphathimandla Sezokwakha - Uma ufisa ukwaziwa futhi uhlonishwe embonini yakho, ukuba khona okukhulu kwezokuxhumana kubalulekile.
Ukulalela - Akubona nje abantu abakhuluma nawe ezinkundleni zokuxhumana, ngabantu abakhuluma ngawe okubalulekile. A ukuqapha Isu libalulekile ukuthola izingxoxo ezimayelana nawe ongamakiwe kuzo kanye nomuzwa jikelele womkhiqizo wakho, imikhiqizo kanye nezinsizakalo.
Ukuxhumana - Kuzwakala kuyisisekelo, kepha ukuqinisekisa ukuthi usebenzisa iziteshi lapho abantu belalele kubalulekile. Uma unezindaba ezibalulekile noma izindaba zokusekelwa mayelana nenkampani yakho, iziteshi zakho zenhlalo zingaba yindawo lapho ungasebenzisa khona isu lakho lobudlelwano nomphakathi.
Insizakalo yekhasimende - Ukuthi uyakholelwa yini ukuthi iziteshi zakho zemidiya yokuxhumana zenzelwe ukwesekwa kwamakhasimende akunandaba… zinjalo! Futhi bayiziteshi zomphakathi ngakho amandla akho okulungisa izingqinamba zesevisi yamakhasimende ngokushesha nangokugculisayo kuzosiza imizamo yakho yokumaketha.
Izaphulelo kanye Specials - Abantu abaningi bazobhalisa uma bazi ukuthi kuzoba namathuba wokunikezwa okukhethekile, izaphulelo, amakhuphoni nokunye ukonga.
Ubuntu - Imikhiqizo, ama-logo neziqubulo akunikezi ukuqonda okuningi enhliziyweni yomkhiqizo, kepha abantu bakho bayakwenza! Ukuba khona kwakho kwezokuxhumana kunika ithuba abalandeli bakho ukubona abantu abalandela umkhiqizo. Yisebenzise!
Faka inani - Ukuvuselelwa kwakho kwezenhlalo akudingeki ukuthi kube njalo ngawe! Eqinisweni, akumele ngaso sonke isikhathi kube ngawe. Ungalifaka kanjani inani kumakhasimende akho. Mhlawumbe kunezindaba noma i-athikili kwenye indawo lapho amakhasimende akho angayithokozela… yabelana ngayo!
Lokhu infographic kusuka Izindawo inikeza izeluleko eziqinile kumabhizinisi afuna ukuqala ukuzibandakanya ku-Twitter, Facebook, LinkedIn, Google + nakwamanye amapulatifomu omphakathi. I-infographic ihambisa umsebenzisi ngokulindelwe okuthile okuyisisekelo kwezinsizakusebenza, ukusetha amakhasi wakho wephrofayili, nokuthi ungayakha kanjani isu lakho lokuxhumana ukuze ungazwakali njengogaxekile!
Tags: dala amaphrofayli ezinkundla zokuxhumanathuthukisa isu lokuxhumana nabantuzingaki izibuyekezo ze-facebookmangaki amahora ezinkundleni zokuxhumanazingaki izibuyekezo zokuxhumanazingaki izibuyekezo ze-twitterindlelaindlela yokusebenzisa imithombo yezokuxhumanai-placetersocial mediaSocial Media Marketingamathiphu wephrofayela yezokuxhumana
Akusuwena Kuphela Olwa Nezibalo
Okthoba 6, 2014 ngo-7: 49 AM
Imithombo yezokuxhumana icishe ibe yisidingo ezweni lanamuhla eliku-inthanethi. Uma kungekho okunye iphrofayli yezokuxhumana esebenza kahle izokwakha ukuthembeka nokwethenjelwa kwamakhasimende akho angaba khona. Njengoba kunamasayithi amaningi laphaya, abathengi bafuna ukwazi ukwethemba inkampani abathenga nayo. Uma unephrofayili yemithombo yezokuxhumana eqinile enabalandeli nezibuyekezo zekhwalithi izokwakha ukwethembeka okusheshayo kubavakashi bakho.
Okthoba 8, 2014 ngo-7: 45 AM
Okuthunyelwe okuhle. Itheknoloji ithuthuke yaze yanweba kangangoba, abakhiqizi bangaxhumana kalula nabathengi babo ngezindlela ezilula nezisheshayo uma kuqhathaniswa nesikhathi esedlule. Imithombo yezokuxhumana idlala indima enkulu ekufinyeleleni kubantu kahle futhi ibize kahle. Ukwengeza ohlwini lwakho, Kuhlala kungcono ngaso sonke isikhathi ukungaguquguquki kuwo wonke amasayithi wezokuxhumana, ngokuya ngezithombe, izithombe zephrofayili, amakhodi wemibala nolwazi. Lokhu kuzonikeza abasebenzisi umuzwa wokuthi basendaweni efanele futhi kushiya umbono futhi kungenza ubuwena bomkhiqizo wakho. Siyabonga ngokwabelana.
May 30, 2016 ku-9: 19 AM
Siyabonga ngolwazi. Imithombo yezokuxhumana ayinakubuyiselwa ezinkampanini eziningi ikakhulukazi kuma-ejensi kulezi zinsuku. Izinkampani ze-B2C zithembele ekufinyeleleni kuzithameli zazo ezijwayele ukubhekiswa kanye nokubandakanya ngokushesha nangempumelelo. Amathuluzi afana neBuffer, iHootsuite neSocialhub.io ayizidingo zalokhu. Isizukulwane esilandelayo sokukhangisa izingxoxo nokusebenzisa amathuluzi obuchwepheshe kulokhu ukwamukela lokhu kungadala ukukhula okukhulu.